Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing: Tusaha Talaabo-Talaabo oo Dhamaystiran | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing: Tusaha Talaabo-Qalab oo Dhamaystiran
Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing: Tusaha Talaabo-Qalab oo Dhamaystiran
0 Daqiiqado 10 ayaa akhriyay
Waxaa laga yaabaa inaad horey u ogeyd in Bing uu yahay mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn, sax? Markaa hubaal waad diyaarsatay Bing Tools Webmaster.
BehmasterMartigelinta waxay heshaa boqollaal qiimeynta shan-xiddigle ah. Maalin walba.
Runtii jecel heerka khibradda iyo taageerada BehmasterInjineerada wada sheekaysiga tooska ah ayaa bixiya. Taageerada 24/7 waa beddelka ciyaaraha ee goobaha waaweyn, gaar ahaan ecommerce.
Ama waxaa laga yaabaa inaadan weli helin sababtoo ah waligaa si dhab ah ugama fikirin.
Iyadoo laga yaabo inaadan u fiirsan Bing sida aad Google u siiso, waa inaad ugu yaraan dejisaa Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah way fududahay in sidaas la sameeyo oo waxay kaa caawin kartaa inaad hesho taraafikada SEO dheeraad ah ee goobtaada.
Aan ku tusiyo.
Waa maxay Aaladaha Maamulaha Mareegaha ee Bing?
Bing Webmaster Tools (Bing WMT) waa adeeg Microsoft oo lacag la'aan ah kaas oo u ogolaanaya maamulayaasha webka inay ku daraan goobahooda gurguurta Bing si ay uga dhex muuqdaan mashiinka raadinta.
Waxa kale oo ay gacan ka geysataa la socodka iyo ilaalinta joogitaanka goobta. Aaladaha maamulaha mareegaha ee Bing waa mashiinka raadinta Bing, waxa Google Search Console u yahay Google.
Qalabka Mareegaha ee Bing dashboard
Qof kasta oo maamula degelka waxa uu ka faa'iidaysan karaa adeegsiga aaladaha maamulaha mareegaha ee Bing, haddii aad tahay mulkiilaha goobta, maamulka goobta, suuqgeeye, ama horumariye mareegaha.
Waa maxay sababta aadan u dayicin Bing
Ugu horrayn: Bing waa lambarka labaad ee liiska makiinadaha raadinta ee ugu waaweyn Maraykanka. Markaa waxaad dooneysaa in goobtaada ay ku darajo sareeyso.
Waa maxay sababtu? Sababtoo ah waxay leedahay dhagaystayaal kala duwan. Marka loo eego xogta la heli karo, saamiga suuqa matoorka raadinta ee Bing wuxuu ku fadhiyaa 9.41%:
Tirakoobka isticmaalka Bing
Hadda, 9.41% waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan mid cajiib ah ilaa aad tixgeliso tirooyinka dhabta ah:
1.3 bilyan oo booqasho caalami ah oo bille ah oo gaar ah Bing.com
12 bilyan bil kasta mugga raadinta adduunka.
500 milyan oo mugga raadinta bishiiba gudaha Mareykanka.
Waa maxay sababta loo isticmaalo aaladaha maamulaha mareegaha Bing?
Aaladaha maamulaha mareegaha ee Bing waxa ay kuu ogoladaan in aad la socoto caafimaadka guud ee mareegahaaga waxa ayna kaa caawisaa in aad aragto sida macaamiishaadu u helayaan goobtaada. Waxaad isticmaali kartaa agabka iyo warbixinada si aad u heshid ereyada muhiimka ah ee wadista taraafiga iyo sidoo kale raadka iyo dhagsiga ereyadaas oo aad u hesho mareegaha adiga kugu xidhan. Waxaad sidoo kale kartaa:
La soco waxqabadka goobtaada oo arag ereyada muhiimka ah ee aad ku qiimaysay
Fiiri sida Bing u gurguurto oo u tilmaamo goobtaada.
Soo gudbi degelkaaga/bogag cusub si loo gurguurto.
Ka saar wax walba oo aadan rabin in lagu tilmaamo
Iska diid xiriirinta
La soco oo xalli malware-ka ama arrimaha spamka ee suurtogalka ah.
Waxaas oo dhami waxay kaa caawinayaan inaad fahanto sida uu Bing u arko mareegahaaga (iyo waxa ku jira) si aad wax kasta oo isbedel ah u samayn karto si aad u horumariso darajooyinkaaga, markaa u wado taraafikada mareegahaaga.
Sida loo Dejiso Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing
Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto koontada Tools Webmaster. Si aad sidaas u samayso, u gudub Aaladaha maamulaha Mareegaha ee Bing oo dhagsii "Sign Up":
Isku qor bogga Bing Qalabka maamulaha mareegaha
Waxaa lagugu dhiirigelin doonaa inaad abuurto akoon Bing WMT adigoo isticmaalaya akoon jira oo loogu talagalay Microsoft, Google, ama Facebook.
Markaad samaysato akoon, waxaad arki doontaa dashboard maran:
Dashboardka goobta Bing ee madhan
Laakin dashboard madhan cidna faa'iido uma aha. Aan ku darno degelkaaga Bing.
U gudbi URL Bing
Marka hore, waxaan u baahanahay inaan ku darno URL.
Ku dar URL goobtaada sanduuqa oo ku dhufo "Add."
Goobahayga ku jira Aaladaha Maamulaha Mareegaha ee Bing
Hadda waxaa lagu geyn doonaa bog aad ku dari karto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobtaada. Aan ku gudano waxaad rabto inaad halkan ku darto:
U gudbi Khariidadda Goobta Bing
Malaha waxa ugu muhiimsan halkan waa in lagu daro khariidadda goobtaada XML ee Bing.
Ku darida khariidadda goobta XML ee Bing
Soo hel khariidadda goobtaada oo ku dheji URL-kaas sanduuqa.
Marka aad intaas ku darto, waxaad uga tagi kartaa inta hadhay ee fursadaha sida ay yihiin, hoos u dhaadhac, oo ku dhufo Save.
Hadda waa waqtigii la bilaabi lahaa xaqiijinta Bing.
Sida loo Xaqiijiyo Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing
Waxaa jira saddex siyaabood oo lagu xaqiijin karo astaantaada:
1. Faylka XML
Si loo xaqiijiyo faylka XML:
Soo deji faylka Bing XML
U soo rar galka xididka boggaaga
Xaqiijinta faylka Bing XML
Tani waxay abuuri doontaa URL: YOURDOMAIN.com/BingSiteAuth.xml
Waxaad u baahan doontaa inaad ku shubto faylkan adigoo isticmaalaya FTP. Haddii aanad marin u lahayn, habkan xaqiijinta waxa laga yaabaa inaanay ku habboonayn.
Xiga waxa ku jira ku darista meta tag bogga hoyga ee goobtaada. Tani waa wax yar oo HTML ah sida sharaxaadda meta.
Meta tag si loo xaqiijiyo Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing
Haddii aad isticmaalayso CMS oo leh qayb HTML-ka caadiga ah, waxaad ku ridi kartaa halkaas si aad u noolaato.
Si Aaladaha Maamulaha Mareegaha ee Bing ay u sii sugnaadaan, waxaad u baahan tahay inaad kaga tagto summadan badan ee meesheeda
3. Bixiyaha Martigelinta: CNAME
Doorashada kama dambaysta ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto diiwaanka CNAME adoo isticmaalaya adeeg bixiyahaaga.
Tani badanaa waa habka ugu dhaqsiyaha badan uguna adag ee lagu xaqiijin karo astaantaada. Laakiin waxay ku xidhan tahay martigeliyahaaga, waxa laga yaabaa inay tahay tan ugu khiyaanada badan.
Raac mid kasta oo ka mid ah saddexda hab ee aad door bidayso (ama dhab ahaantii samayn karto), dhammaantood waxay sameeyaan aasaas isku mid ah.
Hadda waan ogahay in aan idhi waxaa jira saddex siyaabood oo lagu xaqiijiyo Bing WMT, laakiin haddii aad WordPress u isticmaalayso goobtaada, waxaad dhab ahaantii haysataa dhawr ikhtiyaar oo kale:
Ku Xaqiijinta Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing ee WordPress
Habka xaqiijinta ee bogagga WordPress waa mid aad u fudud. Hubi inaad haysato mid ka mid ah plugins-yada SEO-ga ee la rakibay:
Dhammaan Mid ka Mid ah SEO Pack
Dhammaantood waxay sameeyaan qiyaas isku mid ah waxayna dhammaantood caawiyaan hagaajinta SEO-gaaga. Laakin haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo go'aaminta midka aad dooranayso, fiiri falanqaynteena qotodheer ee Rank Math vs Yoast SEO.
Waa kuwan sida loo xaqiijiyo Aaladaha maamulaha Mareegaha Bing mid kasta oo ka mid ah plugins-yada:
Soo gal dhabarkaaga WordPress, ka dibna u tag SEO ee liiska gacanta bidix. Laga bilaabo dashboardka ugu muhiimsan ee Yoast, dhagsii Toolsmaster Webka tab.
Hadda waxaad arki doontaa sanduuq aad ku ridi karto koodka xaqiijinta Bing (iyo sidoo kale koodka Baidu, Google, iyo Yandex sidoo kale):
Yoast SEO Bing Qalabka Webmaster Dejinta
Xusuusnow summada HTML ee hore ee hagahan?
Haddii ay dhacdo inaad illowday:
Meta tag ee Bing
Koobi koodka oo ku dheji Yoast
Markaad sidaa sameyso, si fudud dhagsiiKeydso Isbedelada"ka dib ku noqo Bing Webmaster Tools oo xaqiiji (adoo isticmaalaya habka HTML tag).
Habka loogu talagalay Dhammaan ku jira Xidhmada SEO aad kama duwana.
Tag All In One SEO, ka dibna Settings Guud, oo rog ilaa aad aragto qaybta "xaqiijinta maamulaha shabakada"
Ma rabtaa inaad ogaato sida aan u kordhinay taraafikadayada 1000%?
Ku biir 20,000+ kale kuwaas oo hela warsidaha toddobaadlaha ah ee la socda talooyinka WordPress ee gudaha u socda!
Dhammaan-in-One SEO Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing
Ku dheji summadaada HTML, u rog dhanka hoose ee bogga oo ku dhufo badhanka "Cusbooneysii Options" si aad u kaydiso.
Tag tabka Settings Guud ee darajada Xisaabta.
Bogga dejinta SEO, waxaad ku arki doontaa Aaladaha maamulaha Shabakadda ee liiska hoosaadka, dhagsii oo ku dheji summadaada meta sanduuqa Bing:
Qalabka RankMath Bing Dejinta Qalabka Webmaster
Halkaa ayaad ku socotaa, Aaladaha maamulaha mareegaha ee Bing hadda waa la dejiyay oo la xaqiijiyay.
Laakiin maxaad dhab ahaantii ku samayn kartaa dashboardkaaga cusub?
Isticmaalka Aaladaha Maamulaha Mareegaha ee Bing
Kahor inta aynaan bilaabin sahaminta gudaha Aaladaha maamulaha mareegaha Bing, aan qaadno wareeg kooban oo aan eegno ku darista URL-yada Bing:
Waxaan mar hore eegnay sida loogu soo gudbiyo URL Bing ee qaybta habaynta ee hagahan. Laakin ma ogtahay inaad dhab ahaantii u soo gudbin karto URL-yadaada Bing si aad u dhaqso badan u gurguurato iyo tilmaamid?
Hagaag, waad awoodaa waana mid aad u fudud. Waa kan sida:
Tag "Configure my Site" oo dooro "Submit URLs" ee hoos u dhaca. Kadib, kaliya ku dheji URL-yadaada, ku dhufo gudbinta, oo dib u fadhiiso adigoo og in Bing uu tilmaamayo boggagaaga.
U gudbi URL-yada Bing
Dashboardkaaga Bing WMT, waxaad awoodi doontaa inaad habayso goobtaada, soo gudbiso URL-yada, xidho URL-yada, maarayso isticmaalayaasha iyo wax ka badan. Laakiin aan diirada saarno warbixinada iyo agabyada kala duwan ee ka dhigaya Bing WMT qalab SEO ah oo faa'iido leh oo waxtar leh:
Warbixinno & Xog
Tani waa soo koobida dhaqdhaqaaq kasta oo mareegaha Bing. Jaantuska waxqabadka goobta ayaa muujinaya isbeddelka taariikhaha aad dooratay.
Warbixinada iyo Xogta Bing
Gudaha waxa kale oo aad ka heli doontaa agab iyo warbixino kale:
Raadi Erayada Furaha
Xidhiidhada soo gala
Bal aan si degdeg ah u eegno kuwan:
Warbixinta gaadiidka ee Bing
Tani waxay tusinaysaa URL-yada sare ee goobtaada ee ka muuqda natiijooyinka raadinta Bing, iyo sidoo kale boosaskooda, gujisyada, iyo guji-riix-riminta. Waxaad riixi kartaa "View" si aad u aragto ereyada muhiimka ah URL kasta oo aad u dhoofiso xogta.
Haddii aad rabto inaad SEO-gaaga u qaado heerka ku xiga, kuma tiirsan kartid martigeliyaha gaabis ah. Waxaan bixinaa adeegayaal aad u dheereeya iyo 24/7 taageero heer caalami ah oo ka timaada khubarada WordPress. Eeg qorshayaashayada
Index sahamiyaha gudaha Bing
Index Explorer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto boggaga Bing uu gurguurtay (ama isku dayay inuu gurguurto). Waxay ku siinaysaa xog sida tirada URL-yada la helay, inta ka muuqata raadinta, tirada dhagsiimada iyo tirada isku xirka gudaha. Waxaad ku dhex wareegi kartaa galka oo waxaad arki kartaa xogta meelaha gaarka ah ee goobtaada.
Ka raadi warbixinta ereyada muhiimka ah gudaha Bing
Warbixinta Keywords Search waxay ku tusinaysaa ereyada muhiimka ah ee organic aad ka helayso aragtiyo iyo dhagsiinyo. Asal ahaan URL-yada ugu sarreeya ee ka muuqda Bing. Waxa kale oo aad awoodi doontaa inaad aragto sida goobtaadu u shaqaynayso CTR-wise.
Warbixinta SEO ee Bing
Warbixinnada SEO waxay ku siinayaan talooyin kaa caawinaya hubinta in goobtaadu raacdo hababka ugu fiican ee SEO. Kaliya dhagsii talo si aad u aragto sharaxaad dheeraad ah oo khaladka ah iyo xitaa talo lagu hagaajinayo. Haddii aad la yaabban tahay, warbixintani waxay si toos ah u socotaa toddobaad kasta oo kale waxayna baadhaysaa degel kasta oo la xaqiijiyay ee akoonkaaga ku jira.
Xidhiidhada soo galootiga ayaa ka warbixinaya Bing
Warbixinta Xidhiidhka soo galitaanka waxay tusinaysaa… si fiican, dhammaan isku xidhka soo galitaanka ee uu Bing helay isagoo tilmaamaya goobtaada. Tani waxay faa'iido u leedahay in la arko haddii ay jiraan meelo aad heleyso ama lumisay xiriirinta wakhti ka dib.
Ku gurguurta macluumaadka gudaha Bing
Macluumaadka gurguurta waxa ay bixisa dulmar ku saabsan khaladaad kasta oo gurguurasho oo ka jira goobtaada. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto waxyaabo ay ka mid yihiin khaladaadka uu la kulmay Bing markaad booqato bogga, shay kasta oo uu xannibay robots.txt iyo URL kasta oo malware-ku-dhacey.
Baaritaanka & Qalabka
Qaybtan, waxaad ka heli doontaa qalabyada ogaanshaha oo ay bixiso Bing si ay kaaga caawiso hagaajinta wax kasta oo mareegaha ah iyo hagaajinta muuqaalka SEO ee goobtaada.
Qalabka lagu baadho Bing
Gudaha waxaad ka heli doontaa:
Imtixaan saaxiibtinimo Mobile.
Soo qaado sidii Bingbot.
Qalabka Tijaabada Saaxiibtinimada Mobilka
Qalabka tijaabada saaxiibtinimada moobilka ee Bing
Qof kastaa wuu garanayaa muhiimada ay leedahay in la haysto goobta moobilka ku habboon. Xitaa Bing. Si aad u isticmaasho qalabkan, kaliya geli URL oo ku dhufo "Analyze". Waxaad markaa awoodi doontaa inaad aragto haddii Bing u aragto bogga mid saaxiibtinimo leh, iyo sidoo kale sida uu ugu eg yahay aaladda moobaylka.
Ku samaynta cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee Aaladaha Maamulaha Mareegaha Bing
Qalabka Cilmi-baarista Keyword-ka ee Bing wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si degdeg ah u sameyso cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee gudaha dashboard-ka. Waxay isticmaashaa xogta cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee Bing si ay u muujiso cabbirrada raadinta ereyada muhiimka ah ee Bing (iyo sidoo kale ereyada muhiimka ah ee la xiriira). Waxaad isku mar baari kartaa ilaa 20 erey oo fure ah, wadan ama luqad aad ku kala soocdo waxaadna dhoofin kartaa dhammaan xogta erayga muhiimka ah. Ma xuma bilaash.
Soo qaado sidii Bingbot
Soo qaado sida warbixinta Bingbot
Soo qaado sida Bingbot kuu ogolaato inaad aragto waxa boggaagu u eg yahay gurguurta matoorka Bing. Waa qalab waxtar u leh cilad-baadhista khaladaadka oo laga yaabo inay dhaawacdo mareegahaaga raadinta. Kaliya geli URL-kaaga oo arag isha boggaga sida Bingbot u sameeyo.
Ansixiyaha calaamadaynta xogta qaabaysan/qaabaysan ee Bing
Markup Validator ayaa kuu sheegi doona in qorshaha si sax ah loo fuliyay iyo in kale. Haddii aad isticmaalayso Schema Markup degelkaaga (Schema.org, RDFa, Microformats, HTML Microdata, ama Open Graph), koodka bogga la sawiray ayaa ka muuqan doona warbixinta Bing.
Falanqeeyaha SEO ee Bing
Falanqeeyaha SEO wuxuu sameeyaa waxa uu leeyahay: wuxuu falanqeeyaa boggagaaga SEO waxqabadka. Waxay baari URL kasta oo iftiimisaa haddii boggu u hoggaansan yahay dhaqamada SEO ee ugu fiican, oo ay la socdaan talooyinka.
Hubi qalabka Bingbot wuxuu kuu ogolaanayaa inaad baarto IP-yada ku jira galalka logaga si aad u aragto inay ka tirsan yihiin Bingbot. Haddii ciwaanka IP-gu aanu ahayn mid sax ah, tani waxay tusinaysaa in adeegaha codsigu aanu ahayn mid sharci ah.
U sheeg Bing haddii aad u guurto goobtaada bogag cusub
Dhaqdhaqaaqa site wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah ugu sheegto Bing haddii goobtaadu u guurtay domain cusub. Guud ahaan, Bing waxa uu soo qaadi doonaa jiheeyayaasha oo waxa uu beddeli doonaa tusmaynta si kastaba, laakiin qaabka Dhaqdhaqaaqa Goobta waxa uu dedejin karaa waxyaabaha oo hubiyo in aanay wax dhibaato ahi jirin.
Taasi waa warbixino iyo qalab badan oo waxtar leh oo aad ka heli karto gudaha Aaladaha maamulaha Mareegaha Bing. Laakin intaas kuma eka. Kooxda Bing sidoo kale waxay soo aruuriyeen agabyo faa'iido leh.
Halkan waxaa ah qalabyo, agabyo, iyo akhrin dheeraad ah oo ay isku geysay Bing si ay kaaga caawiso inaad fahanto algorithm-kooda (oo aad ka faa'iidaysato):
Tilmaamaha Maamulaha Mareegaha Bing - Akhrinta tilmaamahan ayaa ah habka ugu dhaqsaha badan ee aad naftaada ugu kici karto. Waxaad baran doontaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato marka ay timaado Bing SEO.
Qalabka Microsoft SEO - Qalabkan SEO ee bilaashka ah ee 100% waa mid aad u fudud in la isticmaalo oo ku gurguurta mareegahaaga si aad u hesho wixii dhibaato SEO ah.
Bing Webmaster Blog - Sida Google, Bing sidoo kale waxay leedahay blog. Akhriso oo isdiiwaangeli si aad ula socoto wararka matoorka raadinta.
Tayada Raadinta Bing-Bing's Tayada Raadinta Blog waxa ay bixisaa dhaqamada ugu fiican iyo aragtida adduunka raadinta.
La xidhiidh kooxda maamulaha mareegaha ee Bing - Midkani runtii maaha qalab, laakiin faa'iido leh si kastaba ha ahaatee. Haddii goobtaada ay dhibaato haysato, waxaad si fudud ula xiriiri kartaa kooxda Bing si aad wax u xalliso.
Marka ay timaaddo hagaajinta SEO-gaaga, qalabyada waaweyn waligood kuma filna. Fiiri casharkan tallaabo-tallaabo ah ee ku saabsan sida loo isticmaalo Aaladaha Maamulaha Mareegaha ee Bing oo u wanaajiso mashiinka raadinta 2aad ee ugu weyn! 📈🚀Riix halkan Tweet
Halkaa waxaad ku haysaa, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato agabka maamulaha mareegaha Bing.
Aaladaha maamulaha mareegaha ee Bing ayaa si dhab ah u bixiya wax kasta oo Google Search Console sameeyo, iyo in kasta oo aanad u isticmaalin wax badan, waa hubaal in lagu daro istaraatiijiyadaada SEO guud.
Horumarinta Waxqabadka Dhabarka dambe 20%
Madaxa antitrust-ka Yurub ayaa sheegay in dawada xaraashka ee Google-ka ee wax iibsiga aysan shaqaynayn